ဟောင်ကောင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မတီသစ်မှာ တရုတ်ကိုထောက်ခံတဲ့ မျိုးချစ်တွေကိုပဲ လက်ခံ ရွေးချယ် - ข่าวสด
ဟောင်ကောင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မတီသစ်မှာ တရုတ်ကိုထောက...
21 ก.ย. 2564 - 00:15 น.
၁၉၉၇ခုနှစ်က ဟောင်ကောင်ကို တရုတ်ပြည်လက်ထဲ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊စနစ်၂ခုပုံစံနဲ့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့
ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မတီဟာ ဟောင်ကောင်ကို အုပ်ချုပ်မယ့် ခေါင်းဆောင်သစ်ကို ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အာဏာရှိတဲ့ ကော်မတီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်သစ် ပြောင်းလဲ ခွင့်ပြုပြီးတဲ့ အချိန်ကတည်းက ပထမဆုံးလုပ်တဲ့‌‌ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မဲထည့်ဖို့ စာရင်းတင်သွင်းတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းဟာလည်း ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ထိတောင် လျှော့ချခံထားရတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒါ ကြောင့် ဒီမဲထည့်တဲ့စနစ် အပြောင်းအလဲလုပ်တာဟာ အတိုက်အခံတွေကို ဟောင်ကောင် ပါလီမန်ကနေ ဖယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတာလို့ အစောပိုင်းမှာ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်သစ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီစနစ်သစ်က တရုတ်အစိုးရကို မထောက်ခံတဲ့ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်တဲ့သူတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲ စနစ်သစ်က တရုတ်ကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုသာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားသလိုဖြစ်နေပြီး ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သူတွေကို လျှော့ချသွားဖို့ လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတိုက်အခံဘက်က တစ်ဦးတည်းအနိုင်ရထားတဲ့ တစ်ချီယွန်းကတော့ "ကျွန်တော်တို့လို အတိုက်အခံတွေအတွက် နေရာလေးတော့ ရှိသေးတာပေါ့ "လို့ ပြောပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသစ်အရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင် တစ်ထောင့်နှစ်ရာကနေ တစ် ထောင့်ငါးရာအထိ အဖွဲ့ဝင်သုံးရာတောင် တိုးပေးလိုက်တယ် ဆိုပေမဲ့ မဲပေးခွင့် ရှိသူ အရေအတွက်ကို ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချလိုက်လို့ သူတို့ကို မဲပေးခွင့်ရှိသူက ၇၈၉၁ ယောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ် ။
၂၀၁၆ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက်က ၂၄၆,၄၄၀ တောင် ရှိပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ပုံစံက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
သမဂ္ဂကလူတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက တစ်ဦးချင်း ဒါမှမဟုတ် အခြားပုံစံတစ်မျိုးမျိုး သြဇာအာဏာရှိတဲ့ သူတွေပဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက် မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်။
အခု နောက်ဆုံးပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသစ်မှာတော့ တစ်ဦးချင်း မဲပေးခွင့် ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာ အဖွဲ့လိုက် မဲပေးခွင့်နဲ့ အစားထိုးလိုက်ပြီး သမဂ္ဂတွေဆိုရင် သူတို့အဖွဲ့က အလုပ်သမားတွေကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ကသာ မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲပုံစံသစ်က လူအနည်းစုရဲ့ အသံကိုပဲကြားရအောင် လုပ်ထားတာလို့ ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေ ပြောကြတာပါ။
"ဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာ မဲပေးသူတွေက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး တစ်ဦးက ကိုယ်စား မဲပေးရတာထက်စာရင် သူတို့ဘာသာကိုယ်တိုင် မဲပေးခွင့်ရသင့်တယ်"လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ကို တိုးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက်ကို လျော့ချလိုက်လို့ ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို တစ်ယောက်ယောက်က နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ် ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီစနစ်အရလည်း ဟောင်ကောင် အစိုးရဟာအနာဂတ်ကာလမှာ သူတို့ လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါက်နေပါတယ်။ "
မဲရေတဲ့ကိစ္စ ၁၄နာရီလောက် နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးနောက် မဲရလဒ်တွေကို တနင်္လာနေ့က ကြေညာလိုက်တယ်လို့ ဒေသတွင်းသတင်းတွေဖေါ်ပြမှုအရ သိရပါတယ်။
၂၀၁၉ခုနှစ်က ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြတစ်ပွဲကို တွေ့ရစဥ်
ဟောင်ကောင်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေက ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲ
ဟောင်ကောင်ကို ဗြိတိသျှကိုလိုနီဘဝကနေ တရုတ်နိုင်ငံ လက်ထဲကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တုန်းက တစ်နိုင်ငံ၊ စနစ်နှစ်မျိုးပုံစံနဲ့ အုပ်ချုပ်ဖို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အရ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာမရနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုးတွေ ဟောင်ကောင်ကို ပေးထားရမှာဖြစ်ပြီး ဟောင်ကောင်မှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် အခြေခံဥပဒေ၊ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်လည်း ရှိပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာရနေတဲ့ အခြေခံ လွပ်လပ်ခွင့်တွေကို ၂၀၄၇ ခုနှစ်မတိုင်ခင် အထိပေးအပ်ရမယ်လို့ ဟောင်ကောင် အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီပုံစံကနေ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတာကြောင့် ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ ဒီမိုကရေစီထောက်ခံ တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချို့ဆန္ဒပြသမားတွေက အကြမ်းဖက်အသွင်ပုံစံပြောင်းလုပ်လာပြီး တရုတ်အစိုးရကလည်း အငြင်းပွားစရာ လုံခြုံရေးဥပဒေအသစ်ကို ပြဌာန်းလိုက်တဲ့အတွက် ဟောင်ကောင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ထိခိုက်လာတဲ့ အပြင် ဆန္ဒပြသမားတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
‌ပြီးတော့ မတ်လတုန်းက မျိုးချစ်တွေပဲ ဟောင်ကောင်ကို အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်း တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ အတည်ပြုနိုင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်သွားပါတယ်။
အတိုက်အခံဘက်က ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသူ လူ အများစု ဟောင်ကောင်အစိုးရရဲ့ ဥပ‌ဒေပြုရေး အဖွဲ့ မှာ ဆက်ပါဝင်ဖို့ ငြင်းပယ်ခံရပြီး လပိုင်းအကြာမှာ ဒီအပြောင်းအလဲဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဟောင်ကောင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မတီသစ်မှာ တရုတ်ကိုထောက်ခံတဲ့ မျိုးချစ်တွေကိုပဲ လက်ခံ ရွေးချယ်